Ny Fifangaroantsika, Ny Tsara Indrindra Amintsika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2018 5:13 GMT
Sary nalain'i Jer Clarke nandritra ny Fihaonambe Global Voices 2017. CC BY-NC-SA 2.0.
Nisy 100 mahery isika nandritra ny fihaonambe anatiny Global Voices 2017 tany Sri Lanka. Avy amin'ny firenena am-polony sy niteny fiteny am-polony. Nandritra ireo andro mialoha ny hetsika ho an'ny besinimaro, sempotra tamin'ny adihevitra sy hetsika maro isika.
Tamin'ny adihevitra iray tahaka izany, nasaina nanolotra teny iray mamaritra tsara ny atao hoe Global Voices isika. Mandefitra, fitoviana, tia mandray, mahitsy, marina, mafàna … Tsy nahita nolazaina aho raha tsy tamin'ny fiafaran'ny fifanakalozan-kevitra. Ary nanolotra ny teniko manokana hoe: fifangaroana (na saritaka).
Mifangaro (misaritaka) isika. Tsy tafiditra anaty fonosana voarindra isika. Tsy miombon-kevitra foana isika. Tsy avy amin'ny tontolo iray isika. Ny tanjaky ny tetikasa iray tahaka ny Global Voices dia ny manaiky fa tsy ny zava-drehetra no mety hiditra ao anaty fonosana kely voarindra miaraka amin'ny fonony tsara tarehy sy vona (noeuds) lafatra.
Hitako miha-voatarika anaty fifangaroana (saritaka) aho ary manohitra ny fitakiana fifanarahana (fitoviana): tsy ny fangatahan'ny fiarahamonina ihany fa ny fangatahako manokana anatiny ihany koa. Isan-andro aho mizara ny fiainako amin'ny olona izay tsy mitovy tontolo ara-kolontsaina amiko sy manohitra ny fomba fijeriko izao tontolo izao. Tsy mora foana izany. Tsy maintsy mampitsahatra ny fanevatevako aho (azo antoka fa tsy kolontsaina iombonana izany). Zara raha mifanojo ny famantarana ara-kolontsaina. Ny tiako lazaina dia, ny nosy Gilligan? Tsy maintsy manontany foana ny fomba fijeriko aho. Tsy misy zavatra azo fotsiny amin'izao. Mety tsy mora na mampahazo aina ny voahodidina olona marobe manana tontolo ara-kolontsaina samihafa, saingy tombontsoa foana izany. Voninahitra ho ahy ny mizara ny fiainako amin'ny fahasamihafana be.
Fifangaroana (Saritaka) ihany koa izany.
Nanomboka ny taona 2017 niaraka tamin'ny taratasy misokatra ho an'izao tontolo izao aho, taratasy nosoratana taorian'ny sakafo niarahana tao amin'ny trano fisakafoanana Tiorka iray tao amin'ny faritra any Londra. Hofaranako amin'izany taratasy izany ihany, navoaka eto indray.
Sary nalain'i Tori Egherman. CC BY-SA 4.0
AVELAO HO SAMIHAFA NY OLONA
Ny alin'ny Asabotsy, tao Hackney, tanàna iray ao amin'ny Farany Atsinanan'i Londra izaho sy Kamran. Nisakafo tao amin'ny trano fisakafoanana Tiorka tsara tarehy teo akaikin'ny trano sinema Hackney Empire izahay.
Feno olona avy amin'ny loko hoditra samihafa sy taona azonao eritreretina ilay trano fisakafoanana. Nisy olona mainty hoditra, fotsy hoditra sy miloko volontany, matetika miara-mipetraka amin'ny latabatra iray. Matetika toy ny fianakaviana iray.
Tsingerintaona nahaterahana telo no nankalazaina tao. Nisy balaonina sy taratasy kely fanipy (kofety). Nisy ny fihomehezana sy ny hirahira.
Nisy vehivavy mainty hoditra teo amin'ny roapolo taona teo manao kiraro avo, pataloha hoditra, sy lobaka volom-borona. Nisy vehivavy fohy fotsy hoditra teo amin'ny 70 taona miaraka amin'ny pataloha volon-tany sy akanjo mafana. Nisy zazalahy feno 18 taona nanaovana fety izay nanao lahateny momba ny hoe lasa lehilahy.
Nitondra mofomamy namboarina tany an-trano ny olona mba hampiarahana amin'ny sakafo natono.
Nikômandy sakafo ampy ho an'olotra efatra tamin'ny volan'olona roa izahay. Nafilotra avokoa izany.
Nijery ny manodidina ahy aho ary nieritreritra hoe: izany no atahoran'ny olona marobe eto amin'izao tontolo izao.
Izay zany. Isika. Eto
Fianakaviana samihafa, sy kolontsaina marobe ireo.
Olona samihafa, mifankatia, faly, misaritaka ireo.
Ireo olona izay nahavita namakivaky ny saranga, foko, sy volon-koditra mba hiteraka fifandraisana ara-pinamanana sy fianakaviana.
Noheveriko fa hirodana izany rehetra izany.
Brexit. Politika fifindra-monina mankahala vahiny. Tahotra tsy misy fototra.
Te-hanadio ny fifangaroantsika – ny tsara indrindra amintsika ireo zavatra rehetra ireo.
Tsy misy miverina. Tsy misy tontolo foronin'ny saina afaka amin'ny fahasamihafana. Tsy mitondra afa-tsy herisetra sy fandringanana izany eritreritra izany. Fantatsika izany.
Isan'andro mandritra ny andro hivelomako, hitolona aho mba hanaiky, hiaro sy hampivelatra ny fifangaroantsika, ny tsara indrindra amintsika, ny fahasamihafantsika.
Fampanantenana kely, avy amin'ny olona kely iray izany, saingy izany no mba hananako.
“Avelao ny olona ho samihafa”
Taratasy nalefa voalohany tao amin'ny Egherman.com
Fahalalahàna miteny 08 Jona 2022